किन तपाईंले फेरि नयाँ वेबसाइट किन्नु हुँदैन Martech Zone
यो एक रेन्ट हुन गइरहेको छ। एक हप्ता हुँदैन त्यो मसँग कम्पनीहरूले मलाई सोध्ने छैन हामी कति खर्च गर्छौं नयाँ वेबसाइट। प्रश्न आफैंले एक कुरूप रातो झण्डा खडा गर्दछ जसको सामान्यतया यसको मतलब यो हो कि ग्राहकको रूपमा उनीहरूलाई पछ्याउन मेरो लागि समयको बर्बादी छ। किन? किनभने तिनीहरू वेबसाइटलाई स्थिर परियोजनाको रूपमा हेर्दैछन् जुनसँग एक सुरू र अन्त पोइन्ट छ। यो होइन ... यो एक माध्यम हो जुन लगातार अप्टिमाइज गरिएको र ट्वीक हुनुपर्दछ।
तपाइँका सम्भावनाहरू तपाइँको वेबसाइट भन्दा टाढा छन्
हामीसँग सुरु गर्नको लागि वेबसाइटहरू किन सुरू गरौं सुरू गरौं। एक वेबसाइट तपाईंको को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो समग्र डिजिटल उपस्थिति जहाँ तपाइँको प्रतिष्ठा बनेको छ र तपाइँ सम्भावित ग्राहकहरु लाई धेरै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि व्यवसाय को लागी, तिनीहरुको डिजिटल उपस्थिति मात्र आफ्नो वेबसाइट हैन ... यो समावेश छ:
निर्देशिका साइटहरू - के तिनीहरू साइटहरूमा देखा पर्दछ जहाँ व्यक्तिहरू तिनीहरूको उत्पादन वा सेवा खोजी गर्दैछन्? हुनसक्छ यो एन्जी, येलप, वा अन्य गुणस्तर निर्देशिकाहरू छन्।
रेटिंग्स र समीक्षा साइटहरू - डाइरेक्टरीहरूको साथ, के तिनीहरू समीक्षा साइटहरूमा देखा पर्दछन् र के ती प्रतिष्ठा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिरहेका छन्? के उनीहरु समीक्षा माग्दै, उनीहरुलाई जवाफ दिदै, र कम पूनरावलोकनहरु सच्याउँदैछन?
YouTube - के तिनीहरूसँग YouTube मा भिडियोहरू छन् जुन उनीहरूको बजार र उद्योगतर्फ लक्षित छन्? यूट्यूब दोस्रो ठूलो खोज इञ्जिन हो र भिडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम हो।
प्रभाव साइटहरू - के त्यहाँ प्रभावशाली साइटहरू र व्यक्तित्वहरू छन् जुन साझेदारी गरिएको दर्शकबाट व्यापक अनुसरण गर्दछ? के तपाईं ती साइटहरूमा मान्यता प्राप्त गर्न खोजीरहनुभएको छ?
इन्जिनहरू खोज्नुहोस् - खरिदकर्ताहरू सक्रियताका साथ जानकारी लिन खोज्दै छन् उनीहरूलाई निर्णय लिने प्रक्रियामा उनीहरूलाई मद्दत गर्न। के त्यहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ जहाँ उनीहरू खोज्दै थिए? तपाईंसँग छ सामग्री पुस्तकालय त्यो लगातार अप टु डेट छ?
सामाजिक संजाल - खरिदकर्ताहरूले अनलाइन संस्थाको लागि हेरिरहेका छन् जुन ग्राहकलाई निरन्तर मूल्य र उत्तरदायी छन्। के तपाईं सक्रिय रूप मा सामाजिक च्यानल मा र अनलाइन समूहमा मानिसहरूलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ?
इमेल मार्केटिङ - के तपाईं यात्रा, सूचना न्यूजलेटर्स, र अन्य आउटबाउन्ड संचार मिडिया विकास गर्दै हुनुहुन्छ जुन सम्भावित खरीददारहरूलाई यात्रा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ?
विज्ञापन - कहाँ र कति प्रयास र बजेट ईन्टरनेट को माध्यम मा नयाँ नेतृत्व लिन को लागी लागू गर्न को लागी बुझ्नु कहिल्यै बेवास्ता गर्न हुँदैन।
तपाइँको डिजिटल उपस्थिति सबै माध्यम र च्यानल समन्वय गर्न आजकलको निरपेक्ष आवश्यकता हो र यो केवल निर्माण भन्दा परे हो नयाँ वेबसाइट.
तपाईको वेबसाइट कहिले पनि हुदैन सम्पन्न
तपाईंको वेबसाइट कहिले पनि हुँदैन सम्पन्न। किन? किनभने तपाईंले काम गर्ने उद्योग परिवर्तन गर्न जारी छ। वेबसाइट भएको भनेको जहाज भएको जस्तो हो जुन तपाईं खुला पानीमा नेभिगेट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँले सर्तहरूसँग निरन्तर समायोजन गर्न आवश्यक छ - चाहे यो प्रतिस्पर्धी हो, खरिदकर्ताहरू, खोज इन्जिन एल्गोरिदमहरू, उभरते टेक्नोलोजीहरू, वा तपाईंको नयाँ उत्पादनहरू र सेवाहरू। तपाईंले भ्रमण गर्न, जानकारी दिन, र रूपान्तरण गर्नेहरूमा सफल हुन तपाईंको नेभिगेसन समायोजन गर्न जारी राख्नै पर्छ।
अर्को समानता चाहिन्छ? यो कसैलाई सोध्नु जस्तै हो,स्वस्थ हुनको लागि कति खर्च हुन्छ?"स्वस्थ हुनको लागि स्वस्थ खान, व्यायाम र समयको साथ गति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। कहिलेकाँही घाउहरू छन्। कहिलेकाँही बिमारी हुन्छन्। तर स्वस्थ हुनुको अन्तिम बुँदा हुँदैन, यसको लागि निरन्तर रखरखाव र समायोजन चाहिन्छ हामी ठूलो हुँदै जाँदा।
त्यहाँ धेरै परिवर्तनहरू छन् जुन तपाईको वेबसाइटमा निरन्तर मापन गर्न, विश्लेषण गर्न र अनुकूलन गर्न आवश्यक हुन्छ:
प्रतिस्पर्धी विश्लेषण - समायोजन र अनुकूलन तपाइँको प्रतिस्पर्धा से अलग करने को लागी। तिनीहरूले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ रूपमा, शेयर साझा, र तिनीहरूको उत्पादन र सेवा प्रस्तावहरू समायोजित गर्नुहोस्, यति धेरै तपाईं।
रूपान्तरण अनुकूलन - तपाईंको लीडहरू वा ग्राहकहरू बढाउन वा घटाउनको लागि प्रवृत्ति हो? तपाइँ कसरी यसलाई सजिलो बनाइरहनुभएको छ? के तपाईसंग कुराकानी छ? कल-टु-कल? प्रयोग गर्न सजिलो फारामहरू?
उभरती टेक्नोलोजीहरू - नयाँ टेक्नोलोजीहरू अपेक्षा हुँदै जाँदा, के तपाईं ती लागू गर्दै हुनुहुन्छ? आजको वेबसाइटको आगन्तुकसँग धेरै भन्दा फरक आशाहरू छन्, स्वयं-सेवा गर्न चाहानुहुन्छ। एउटा उत्कृष्ट उदाहरण भेटघाट तालिका हो।
डिजाइन प्रगतिहरू - ब्यान्डविथ, उपकरणहरू, स्क्रीन आकारहरू ... प्रविधि अगाडि बढ्न जारी छ र एक प्रयोगकर्ता अनुभव डिजाइन गर्न जुन यी परिवर्तनहरूलाई समायोजित गर्दछ स्थिर परिवर्तनको आवश्यकता छ।
खोज इन्जिन अनुकूलन - डाइरेक्टरीहरू, सूचना साइटहरू, प्रकाशनहरू, समाचार साइटहरू, र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू सबै खोज ईन्जिनमा तपाईंलाई हराउन कोशिस गर्दै छन् किनकि ती प्रयोगकर्ताहरूको खरीदको सबैभन्दा ठूलो अभिप्राय छ। तपाइँको कुञ्जी शव्द श्रेणीकरण र तपाइँको सामग्री अनुकूलन यस महत्वपूर्ण माध्यम को शीर्ष मा राख्न महत्वपूर्ण छ।
जुनसुकै मार्केटिंग एजेन्सी वा पेशेवर तपाईंले भाँडामा लिनुभएको तपाईंको उद्योग, तपाईंको प्रतिस्पर्धा, तपाईंको भिन्नता, तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरू, तपाईंको ब्रान्डि,, र तपाईंको सञ्चार रणनीतिबारे राम्ररी सचेत हुनुपर्दछ। तिनीहरू केवल एउटा डिजाइनको ठट्टा गर्दै र त्यस डिजाइनको कार्यान्वयनको मूल्य निर्धारण गर्नु हुँदैन। यदि तिनीहरू सबै यही गरिरहेका छन् भने, तपाईंले काम गर्न नयाँ मार्केटिंग पार्टनर खोज्नु पर्छ।
एक डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रियामा लगानी गर्नुहोस्, परियोजना होइन
तपाईंको वेबसाईट टेक्नोलोजी, डिजाईन, माइग्रेसन, इन्टिग्रेसनहरू, र - अवश्य तपाईंको सामग्रीको संयोजन हो। दिन तपाईंको नयाँ वेबसाइट लाइभ भनेको तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्टको अन्त्यबिन्दु होइन, यो शाब्दिक रूपमा उत्तम डिजिटल मार्केटिंग उपस्थिति निर्माणको पहिलो दिन हो। तपाईले एक पार्टनरसँग काम गर्नुपर्नेछ जुन तपाइँलाई समग्र डिप्लोयमेन्ट योजना पहिचान गर्न मद्दत गर्दै छ, प्रत्येक चरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दै।
कि त्यो एक विज्ञापन अभियान हो, एक भिडियो रणनीति को विकास, ग्राहक यात्रा को नक्शा, वा एक अवतरण पृष्ठ डिजाइन ... तपाईं एक साथी मा लगानी गर्नुपर्छ कि कसरी सबै कुरा मिलेर काम गर्दछ बुझ्नुहुन्छ। मेरो सिफारिश को लागी तपाइँको वेबसाइट को बजेट टस र यसको सट्टा, एक लगानी निर्धारित गर्न को लागी तपाइँले प्रत्येक महिना बनाउन चाहानुहुन्छ तपाइँको डिजिटल मार्केटिंग रणनीति कार्यान्वयन गर्न जारी राख्न।
हो, निर्माण एक नयाँ वेबसाइट त्यो समग्र रणनीतिको अंश हुन सक्छ, तर यो एक निरन्तर सुधार प्रक्रिया हो ... कुनै परियोजना होइन जुन कहिले पनि पूर्ण गर्नुपर्दछ।
टैग: एजेन्सीनिरन्तर सुधाररूपान्तरण अनुकूलननयाँ वेबसाइटवेबसाइट बजेटवेबसाइट लागतवेबसाइट डिजाइन